10 သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမနိုင်သလားသန်းတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေး Quotes - သတင်း Rule
10 သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမနိုင်သလားသန်းတကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေး Quotes
ဒါဟာတစ်ခက်တနေ့အလုပ်ပြီးနောက်အနားယူရန်ကြွလာသောအခါသင်တို့အပေါ်မှာသင်တို့လက်ရနိုင်တယ်လို့အနည်းငယ်ကော်ဖီသို့မဟုတ်ဘီယာသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရက်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်ကျည်ယူစေခြင်းငှါ,. ကောင်းစွာ, yeah ငါအဖြစ်ကိုကောင်းစွာတ ပတ်သက်. အပြစ်ရှိကြောင်းရယ်, ငါဗော့ဒ်ကာဝက်အဝတ်အချည်းစည်းအနည်းငယ်ကျည်ပြီးနောက်ငါ့ဦးခေါင်းကျော်တစ်ဦးမီးကာဝတ်ဆင်သေဆုံးဖမ်းမိတာပါမဟုတ်လျှင်! အဆင်ပြေ, မကောင်းတဲ့ဥပမာအားငါယစ်မူး stupor ၏ပြည်နယ်၌ငါ့ကိုအကြောင်းအိပ်မက်ဆိုးရတဲ့ပြီးနောက်ဒီစာဖတ်ခြင်းလူတိုင်းတောင်းပန်ပါတယ်.
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဲ့သွေးကြော-လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်စိတ်ဖိစီးမှုနှငျ့ရငျဆိုငျရသောအခါမည်ကဲ့သို့လူတွေကိုအသက်တာ၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြတ်သန်းသွားဘူးဆိုတာပါပဲ? ငါဆိုလိုတာက, ဇင်သို့မဟုတ်ယောဂကဲ့သို့အသစ်အသက်အရွယ်အရာကောင်းသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကအမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်. အပြောင်းအရွေ့အပေါ်နေစဉ်အမှန်တကယ်နှင်းဆီပန်း-in-a-လုပ်နိုင်တဲ့အနံ့နိုင်သူလူများ၏ပညာတတ်ဘက်များအတွက်အခန်းရှိပါသလား? ဒါဟာကြင်နာငါ့ကိုတကယ်ဒီ 'စိတ်ကို-over-အမှု၌အရာတစ်ခုခုရှိရမည်ဟုစဉ်းစားခဲ့’ အရာ.
ဟာသအမှန်ပင်သင်အခါတိုင်းလည်းမရှိကအကောင်းဆုံးဆေးဝါးဖြစ်ပါသည်. ငါမည်သူမဆိုဒါကြောင့်ခက်ခဲရယ်မောပြီးနောက်ရုံသင်သည်သင်၏ဘောင်းဘီပေါ်သို့စေတဲ့လူရွှင်တော်နားထောင်ဖို့ကောင်းသောပိုက်ဆံပေးချေနိုင်ပါတယ်ဆိုလို. ဖြစ်ပျက်ခဲ့ယျ၏နေသော်လည်း, နှင့်မြဲပေးနေတာသော်လည်းသွားပြီဟုသောသူတို့အဖို့, တိမ်ရူပါရုံကိုနှင့်အတူအမျက်ဒေါသထက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကိုအတူဒုက္ခရင်ဆိုင်နေရစဉ်ကပဲရယ်မောဖို့ပိုကောင်းမယ့်. အားလုံးအချိန်ငါ့အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေတစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ Woody Allen ဖြစ်ရှိစေခြင်းငှါ. ယခုဤသူသည်သင်တို့သူ Gusto နှင့်အတူထွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့သော In-သင့်ရဲ့-မျက်နှာတုံးသောသူတယောက်ကောင်လေးသည်, ပင်ပင်ကြိုးစားနေမပါဘဲ. သင်တစ်ဦးသည်လူနှင့်အတူဘာမှအကြောင်းမယ့်စကားပြောဆိုနိုင်, သူသည်ဘာသာရပ်ကဲ့ရဲ့မှခညျြနှောငျရဲ့နှင့်သင်ရယ်မောအစားထက်ကအကြောင်းစိတ်ဆိုးဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်.
အင်္ဂလိပ်: နယူးယောက်စီးတီးရှိဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဒါရိုက်တာ Woody Allen. (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ဒါရိုက်တာ Woody Allen ကပြောပါရန်ဤရှိပါတယ်:
1. “ပိုက်ဆံဆင်းရဲမွဲတေမှုထက် သာ. ကောင်း၏, ဘဏ္ဍာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သာလြှငျ။” ဒါဟာအကြှနျုပျအားကောင်းသောအသံ, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာ၏လကျတှေ့ပိုက်ဆံပါဝင်ပါဘူးဆိုလိုပေမယ့်အဲဒါကိုရဖို့တစ်ဦးလက်မောင်းကိုတစ်ဦးခြေထောက်ယူမှမရှိပါဘူး.
2. “ငါတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ထွက်ရှိ၏ယုံကြည်. ကံမကောင်းသဖြင့်, ထိုသို့အစိုးရပါပဲ။” '' Nuff ကပြောပါတယ်.
3. “သေခြင်းထက်အသက်တာ၌ပိုမိုဆိုးရွားမှုအရာရှိပါတယ်. သငျသညျအစဉျအမွဲတဦးအာမခံအရောင်းစာရေးနှင့်အတူညနေခင်းကုန်ရပြီ?” ဒါကဂန္သူမြားကိုတစျခုဖွစျဖွစျသှား. ငါဘဝနည်းနည်းပြဿနာတွေအကြောင်းကိစ္စအားလုံးကြောင်းမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလို, သူ '' သည်အထိ’ ထပြသထားတယ်.
သေချာအောင်, ဆက်ဆံရေးရှုပ်ထွေးရနိုင်, သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်နိုင်မဆိုစာရေးဆရာမကြာမီကရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ချည်နှောင်ကြောင်း၎င်း၏ဆိုးကျိုးများရှိပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးအလိုရှိသောအရာကိုအတိုင်းလိုက်နာ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးအသှေးကိုစုပ်သောနှလုံး၌ရှိသကဲ့သို့နှလုံးကိုအကြောင်းပြောနေတာင်မဟုတ်လျှင်.
4. “ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဖြေဖြစ်ပါသည်, သင်မူကား, အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, လိင်အချို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမေးခွန်းထုတ်။” ထိုအသင်ပိုမိုချင်တယ်ဆိုရင်, ကိုယ့်ကိုတောင်းထား!
5. “ပါးစပ်ဓတေားအကြောင်းကိုတစ်ဦးအစာရှောင်စကားလုံး. ငါနှင့်အတူအိပ်ရာသှားဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦးဟုမေး, သူမ '' အဘယ်သူမျှမ '' ဟုပြောသည်။” ဒါဟာအသံ, '' လက်တွေ့ကျတဲ့ '', ကျွန်တော်ထင်သည်.
ထိုသို့နေ့စဉ်ဘဝမှကြွလာသောအခါ, သူတကယ်တိုင်းဖြစ်နိုင်သမျှဇာတ်လမ်းထဲကအကောင်းဆုံးကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်, သူတစ်ဦးအာရုံကြောရိုက်လျှင်တကတရားစွဲဆိုမှုပါဝင်ပါဘူး.
6. “အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော့်ဇနီးနုခဲ့. ငါရေချိုးအတွက်အိမ်မှာဖြစ်င့်နှင့်သူမအတွက်လာနှင့်ငါ့လှေနစ်မြုပ်ချင်ပါတယ်။” ငါငါ့ရေချိုးကန်ထဲမှာလှေမရှိခဲ့ဘူး. ပူပြင်းတဲ့ရေထဲမှာစိမ်စဉ်ကစိုက်ကြည့်ပြီးသားငါ့ကိုလှိုငျးမူးစေသည်.
7. “သေမင်းမကြောက်ဘဲဖြစ်ကြောင်းကို, ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရသောအခါရှိချင်ကြပါဘူး။” ဒါကြောင့်မိုးရွာနေလျှင်, ဒါကြောင့်သုံးသော.
8. “ငါရယ်မောခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏, နို့ကိုငါ့နှာခေါင်းထဲကကြွလာသောအခါ မှလွဲ. ။” သငျသညျbeerÖသို့မဟုတ် mouthwash အပေါ် guzzling နေတဲ့အခါပိုဆိုးရနိုင်, ထိုသို့တစ်ချိန်ကငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်!
9. “သငျသညျဘုရားသခငျသညျရယ်မောစေလိုပါလျှင်, သင်၏အကြံအစည်နှင့် ပတ်သက်. သူ့ကိုပြောပြပါ။” အနည်းဆုံးသူလျှပ်စီးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလုပျကွံမပါဘူး, ငါအဘို့အကျေးဇူးတင်မိပါတယ်.
ထိုအနေသော်လည်းလာမည့်တဆယ်ကိုလူအပေါင်းတို့အားဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါအဘယျအရာကို, နှစ်ဆယ်, သို့မဟုတ်ပင်နှစ်သုံးဆယ်, ကျနော်တို့အပေါင်းသည်အလင်းနှင့်မယ့်ရှုထောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးအမှုတို့ကိုမြင်ဖို့ရှိသည်ခန့်မှန်း. I can’t seem to imagine life without any piece of wisdom that could guide us. Whether we’re religious or not, it takes more courage to accept your fears and learn how to deal with them is all that matters when it comes to even just getting along.
22055	0 ABC (Golden Tell-A-Tale Book), Aliveness (martial arts), Annie Hall, Laughter, Woody Allen
← ပလူတို၏အများစုဟာအသေးစိတ်စကင် [VIDEO] ရောဂါကိုတိုက်မှကင်ဆာရောဂါကုသအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များကိုရှေ့ဆောင် →